Madaxweyne Xasan: Weerarka maanta wuxuu muujiyey in Shacabku uusan xiriir la laheyn Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
20th February 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cambaareeyey weerarkii qaraxyada ee Alshabaab maanta la beegsadeen hotel ku yaala magaalada Muqdisho, kaasoo lagu dilay dad fara badan oo Mas’uuliyiin sarsare ku jiraan.
“Aad baan uga xumahay in kooxaha nabadda ka soo horjeeda ay mar kale dad Muslimiin ah oo waajibka salaadda Jimcaha gudanaya ay ku weerareen masjid hoteelka Central ku dhex yaalla. Ilaahay ha u naxariisto inta ku dhimatey, kuwa ku dhaawacmeyna waxaan Ilaah uga baryayaa inuu degdeg caafimaad buuxa u siiyo.” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ugu baaqey shacabka inay sii wadaan gacansiinta iyo la shaqeynta laamaha amniga.